Jose Mourinho oo sharaxaad ka bixiyey qaladaadkii burburiyay Manchester United kulankii Barcelona – Gool FM
Jose Mourinho oo sharaxaad ka bixiyey qaladaadkii burburiyay Manchester United kulankii Barcelona
Dajiye April 20, 2019
(Yurub) 20 Abriil 2019. Macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa si weyn u dhaleeceeyay qaab ciyaareedka tababare Ole Gunnar Solskjær kulankii lasoo dhaafay ee Barcelona.
Kooxda Barcelona ayaa awooday in 3-0 ay kaga adkaato Manchester United kulankii lugta labaad ee wareega siddeed dhamaadka tartanka Champions League.
Hadaba macalinka reer Portugal oo ka hadlay qaab ciyaareedka kooxdiisii hore ee Red Devils kulankii lasoo dhaafay ay kula ciyaareen Barcelona garoonka Cump Nou ayaa wuxuuna yiri:
“Qaladaad iyo goolal badan, waxaan u maleynayaa in qaab ciyaareedka United uu ahaa mid ka duwan sidii hore, waxay ila tahay in kulanka lugtii hore ay isku dayeen in ay xakameeyaan khadka dhexe iyo Messi, taasoo u muuqata inay fududahay in la fahmo, balse ma ahan wax sahlan inaad xakameyso isaga”.
“Messi wuxuu kaaga imaanayaa mararka qaar garabka midig, hadana wuxuu soo galayaa khadka dhexe, Rakitić ayaa u wareegaya dhanka midig, wuxuuna u ogolaanayaa inuu sii joogo qeybta dhexe, waana arin aad u adag”.
“Manchester United waxay si heersare ah u xakameysay booskan kulankii lugta hore, sababtoo ah marka uu Messi soo galo khadka dhexe wuxuu cadaadis xoogan kala kulmay xidigaha Fred iyo McTominay, waxaan filayaa in United-ka ay la kulantay guuldaro 1-0 kulankaas”.
“Pogba wuxuu joogay garabka bidix, halka McTominay uu ku sugnaa dhanka midig, Jesse Lingard ayaa ka ciyaarayay booska No. 10-aad, daafacyada hortooda waxaa ku sugnaa kaliya Fred, waana meesha kaliya uu ka soo xaroodo Messi, isla markaana uu kubadda ka helo, marka ay shaqsi iyo shaqsi tahayna waa midaad ku dhimatay, waana sababta aanan u jecleyn in Messi aad kaga hor timaado waji ka waji”.
Ugu dambeyntii Jose Mourinho ayaa hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay.
“Barcelona waa Barcelona, ​​waa koox ka fiican Manchester United, waxay heystaan ciyaartoy ka fiican Manchester United, waxaan u maleynayaa inay dabiici tahay inay guuleystaan”.
Bale oo ku wargeliyay kooxda Real Madrid go'aankiisa kama dambeysta ah, kahor suuqa xagaaga
Bayern Munich oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddig sare oo ka tirsan Kooxda Tottenham